ELISA Kit, Test Elisa, ELISA dayo, Insaymkaas Immunosassay - Donglin Sayniska & Tech
Waxaan inta badan diiradda saarayaa horumarinta iyo wax soo saarka ee immunoassay eulayska reagents ogaanshaha, horumarka farsamo shaybaarka iyo adeegyada iyo sidoo kale horumarinta software computer.
Waxaan si diiran idiin ku yeedhi inuu nagu soo biiro, waxaana qarka u saaran yihiin in ay sii iskaashi muddo dheer aad la. All wakiilka iyo OEM waxaa soo dhaweeyay.
Xoog ee heerka
Shirkadda Our wuxuu leeyahay 3 laamood: Shanghai, shirkadda Beijing iyo Kanada iyo HQ in Wuxi. Waxaan leenahay waaxda iibka, waaxda wax soo saarka, waaxda cilmi-baarista iyo horumarinta, waaxda farsamada iyo saadka.
Wuxi Donglin Sayniska & Tech Development Co., Ltd., Waa soo saaraha ah iyo alaab-of reagents noolaha sayniska nolosha, xarunteeduna tahay magaalada aagga muuqaal dabiici ah ag Taihu Lake.
La asaasay 1997, Shirkadda bilaabay ganacsi sida bixiyaha adeegga OEM ah xirmooyinka ELISA dhamaan aduunka oo dhan.
In 2013, waxaan bilaabay our brand gaar DLdevelop. Waxaan ku takhasusay soo saarta xirmooyinka ELISA iyo Asia, Oceania, Africa, Europe iyo America qaybiyo. Iyadoo ballaarinta ganacsiga, aan qotomiyey laan la dibada ee Canada, mid ka mid ah gudaha ee Shanghai.
Human baalal lahayn Nooca MMTV Integration Site Famil ...
Human Collagen Type I Alpha 2 Kit (COL1a2) ELISA
Kooxda Human Of kaladuwan 40 Ligand (CD4 ...
Rat Transglutaminase 2, Cadka Kit (TGM2) ELISA
Wuxi Donglin Sayniska & Tech Development Co., Ltd.